MANOR "Indlu kaBawo 🧡"
Korostiv, L'vivs'ka oblast, Ukraine
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguЛілія
Indawo yasefama "Batkivska Khata 🧡", indlu epholileyo kunye nemibalabala kwisitayile saseCarpathian, iyakumema ukuba ube nexesha elimnandi kunye nokonwaba. Iikhilomitha ezili-115 kuphela ukusuka eLviv - kwaye ukwiCarpathians!
Indlu enemigangatho emibini, enamagumbi okulala amabini abanzi kumgangatho woku-1, igumbi lokuhlala elinye, ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye neveranda enkulu. Kumgangatho we-2nd kukho amagumbi amabini okulala kunye negumbi lokuhlala elinye. Indlu iyarenta ngaphandle kwabanini kwaye inayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale kamnandi.
Ecaleni kwendlu (imizuzu emi-5 yokuhamba) kukho indawo yokuzonwabisa apho unokuba nexesha elimnandi, uhambe ukuloba, udlale iibhiliyoni, umphunga kwi-tub yeCarpathian kwaye udle kakuhle, kwaye ngexesha elifudumeleyo ukubhukuda echibini langaphandle.
Umlambo wentaba uhamba ngokusondeleyo kwindlu, apho unokuqubha khona.
Kubathandi beentaba kukho iiklasi - ukusuka kwidolophana kukho iindlela ezininzi eziya kwiNtaba yeParashka (1268m).
Umbuki zindwendwe ngu- Лілія
Ngolwazi oluthe vetshe tsalela (093) 93 14 991, Lily.
Unako kwakhona ukubhala Viber kule nombolo yefowuni.
Iilwimi: English, Українська